: at 2/09/2011 03:00:00 PM
An Asian Tour Operator said... | Wednesday, February 09, 2011 4:08:00 PM
အဲဒါပေါ့ အပင်မြင့်လေ.. လေတိုက် အခံရလေ ဆိုတာမျိုး။ အစ်မကိ အတော်မြင့် နေပုံရတယ်။ ကျနော့် အထင်တော့ လင်ဇီး စပိုင်တွေ လုပ်သလားပဲ :))
အဖြူရောင်နတ်သမီး said... | Wednesday, February 09, 2011 4:54:00 PM
နတ်သမီးက ပိုလို့တောင် ရဲရဲတောက်နေတယ် မကိရေ...
အခုထိ ဆိုဒ်ဘားကဟာတွေဖြုတ်ချထားတာတောင် Blocked နေတုန်းပဲ..။
နောက်ဆုံးမရတော့လည်း အိမ်ပြောင်းလိုက်ယုံပဲ၊ ကိုယ့်ကိုလည်း သိနေကြပြီပဲ..။
မကိအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုလို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်၊ ကိုယ်ချင်းစာတယ်လေ...။
Nge Naing said... | Wednesday, February 09, 2011 5:03:00 PM
Kiki ရေ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တုန်းက မရောက်ဖြစ်ဘူး အခုပြဿနာတွေ အဆင်ပြေသွားမှ ရောက်လာတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ခါနီးမှာ ဘလော့၈်မှာလည်း ဒီလို သူများလာထည့်သွားလို့ ကွန်ပြူတာ Set up ပြန်လုပ်ရဖူးတယ်။ ပို့စ်အသစ်တွေကို ဖတ်သွားပါတယ်။ ဆေးအကြောင်း ပို့စ်ရော မှတ်ချက်တွေရော ဖတ်လိုက်တာ ခေါင်းမူးသွားလို့ မှတ်ချက်တော့ မရေးတော့ဘူး။
ahphyulay said... | Wednesday, February 09, 2011 7:26:00 PM
တစ်မျက်နှာရော့ တော့ မလို့ ။
ကျွန်တော်တို့ လဲ တတ်ရောင်ကား နေတာကြာပြီ။
rose of sharon said... | Wednesday, February 09, 2011 7:27:00 PM
ဟယ်...ကိကလေး တော်တော်စိတ်ညစ်သွားမှာဘဲ... ပြန်ကောင်းသွားလို့တော်ပါသေးရဲ့...
မိုးယံ said... | Wednesday, February 09, 2011 7:31:00 PM
96 ပါး ပျောက်တဲ့လင်ဇီး ဆေးနဲ့ ကုလိုက်ပါ မွမွရယ်။
ကိုဇော် said... | Wednesday, February 09, 2011 7:36:00 PM
စောစောက ပြောရောပေါ့ မကိရယ်။ လိုင်စင်နဲ့ မဟုတ်တာကို လိုင်စင်နဲ့လို ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ မည်းမည်းကြီးကို အကုန် ပြန်ကောင်းအောင် Format မချ ၊ ဝင်းဒိုး အသစ်တင်စရာ မလိုဘဲ ကောင်းအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာ။ ဖြစ်ရလေ။ အခုတော့လည်း အကုန် အသစ်ဖြစ်တာပေါ့လေ ဟီးဟီး။ အခုကရော ဝင်းဒိုးက7မဟုတ်လား။ ဒါကိုလည်း Update လုပ်လို့ ရအောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ကျနော် ပြောပြမယ်။
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) said... | Wednesday, February 09, 2011 7:51:00 PM
အဲဒါကြီးက ဘာကြီးလဲ မသိဘူး။ ကြောက်စရာကြီးပါလား။ အဖြူရောင်နတ်သမီးဆိုက်ဒ်ထဲ ခဏခဏ၀င်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ အဲဒါကြီးဘဲ ပေါ်နေတယ်။ ၀င်လို့လဲ မရဘူး။ အော်... ဘလော့မှာလဲ ဘလော့ရောဂါတွေနဲ့ပါလား။ လောက လောက။ သံဝေဂယူစရာတွေချည်းပါဘဲ။
rose said... | Wednesday, February 09, 2011 8:02:00 PM
မကီကီ... ပာုတ်တယ်နော်... ကွန်ပြူတာ ပျက်ရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗိုင်းရပ်စ် ၀င်ရင် ဖြစ်ဖြစ် သိပ်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ရို့စ် ကွန်ပြူတာလည်း Graphic Card ပျက်သွားတယ်လေ။ အဆင်ပြေပါစေရှင်။
Anonymous said... | Wednesday, February 09, 2011 10:14:00 PM
ပလပ်ပေါက် ကိုင်မိလို့များ လက်စားချေခံရတာလားအစ်မရယ်။ တားတားကြောက်ကြောက်။
ခြင် said... | Wednesday, February 09, 2011 10:56:00 PM
အကိရေ လိပ်စာသစ်မှာ သွားရှာနေတာ... တော်ပါသေးရဲ့အေ...
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Thursday, February 10, 2011 1:23:00 AM
လင်ဇီးမှမသောက်တာ..အဲဒါ ကွန်ပျူတာကင်ဆာ ရတာနေမှာ..
လငျးထကျ said... | Thursday, February 10, 2011 7:14:00 AM
မကိ ရေ third parties can add malicious code to legitimate sites ဆိုတာ သူများ လာထည့်တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ဖာသာ ထည့်ကြတာပါ ဥပမာ အမ ဆိုဒ် အောက်ဆုံးက ကောင်တာ လိုမျိုး နာရီလိုမျိုး အဲလိုဟာတွေပါ အဲဒီ ကုတ်တွေမှာ Script လို့ ခေါ်တဲ့ javascrip ဖိုင်တွေကို ပြန်ပြီး လင့်ညွှန်းထားတာပါ တစ်ကယ်လို့ မတော်လို့ သူတို့က အဲဒီ ကုဒ်တွေထဲက ဖိုင်ထဲမှာ သူတို့ ပေးထားတဲ့ ကုဒ်ကို ထည့်တဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အတွက် ကုဒ်တွေ ရေးထည့်ပေးလိုက်ရင် Hack ခံရနိုင်ပါတယ် ဥပမာ ပြောပြတာပါ အခု အမ ပြောတဲ့ မဲလဝဲ မဖြစ်ပေမယ့် ရောဂါပိုး ကူးသလို ဘလော့တွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကူးနေတာ အတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေ ပိုစ့်ထပ်တင်ထားပါတယ် လာဖတ်ကြည့်ပါအုံး ဘလော့ဂါတိုင်း အခု သိထားသင့် ရှင်းလင်းသင့်နေပါပြီ ..။
အဖြူရောင်နတ်သမီး said... | Thursday, February 10, 2011 11:15:00 AM
နတ်သမီးဆီက အနီရောင် ကောင်ကြီးတော့ သေသွားပြီ မကိရေ...။
လငျးထကျ said... | Thursday, February 10, 2011 6:44:00 PM
မကိ ကိုသဘောပြောပြတာပါ နာရီတွေ ကောင်တာတွေ ဖြုတ်စရာမလိုပါဘူး comment တွေကို spamထဲ ထဲ့ ပြီးရင် အဲဒီ အပေါ်ဆုံးမှာ Published နဲ့ Spam ဆိုတာ နှစ်ခု ရှိပါတယ် မကိ Comments ထဲ ဝင်တာနဲ့ အရင်ဆုံး Published ထဲ အရင်ရောက်တာပါ ဘေးက Spam ဆိုတာလေး နှိပ်ပြီး ကိုယ်ပြန်ထည့်ချင်တဲ့ ကွန်မန့်ကို Not Spam ဆိုတာလေး ပြန်လုပ်လိုက်ရင် ပြန်ပေါ်လာမှာပါ..
Anonymous said... | Friday, February 11, 2011 2:02:00 PM
ကိရေ...ကိုယ်က အိုင်တီ အရမ်းကျွမ်းကျင်တော့ ပထမ ကော်မန့်တွေကို ဖျက်လိုက်တာ ၁၀၀ကျော်လောက်ရှိတယ်... ပြီးမှ စပမ်ထဲထည့်တော့ အရှေ့ကဖျက်မိတာတွေ နှမြောလိုက်တာ :(
kiki said... | Friday, February 11, 2011 3:24:00 PM
Anonymous said... | Tuesday, February 15, 2011 10:29:00 AM
မကိရေ။ မကိကွန်မန့်ကို ဖတ်ပြီး ကုတ်နေရတယ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said... | Tuesday, February 15, 2011 7:19:00 PM
ပြန်ရောက်တော့ ၀ဲစွဲနေတာနဲ့ တိုးတာဘဲ
တစ်ချို့က လင့်ချိတ်တာနဲ့ ပြန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုလို့ အေးဆေးမှ ချိတ်တော့မယ် စိတ်ကူးတယ်.
မကီ နေကောင်းပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေနော်